Ukubulala mna (Blog) Ngokuthambileyo | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 1, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Iindwendwe: Phantsi 33%
Ukujonga iphepha: Phantsi 18%
Imirhumo yeRSS: Nyuka nge-5%
I-Adsense: Phantsi 70%
Isikhundla seTekhnoloji: Phantsi nge-4%.
Ezi zezinye zezibalo zam kwezi veki zimbini zidlulileyo kwibhlog yam! Kwiindwendwe zam eziqhelekileyo, uya kuqaphela ukuba khange ndibhloxe ngokungaguquguqukiyo- yenye yezo khadinali imigaqo ongaze uyaphule. UkuBhloga konke malunga ngesantya. Nje ukuba ulahlekelwe ngumfutho, akukho ndlela yakutshanje yokubuyela umva.
Ndiqaphele ezinye iibhlog zenza umsebenzi omangalisayo wokugcwalisa indawo efileyo ngo:
Ukufumana kwakhona iiposti zebhlog ezaziwa kakhulu.
Ukuba neeblog blog.
Ukutsala kwimultimedia (ividiyo okanye isandi) iziqwengana ezikwisihloko kwaye ziyafumaneka nge Youtube kunye namanye amajelo.
Elona cebo ndilithathileyo kukuqhubeka nokuthumela Del.icio.us amakhonkco. Ndayeka ukubhala, ndicinga ngokubhala ndayeka ukuthatha inxaxheba kwezinye iincoko zebhlog. Esinye sezizathu zokuba ndingazibeki ezinye iindlela ukugcina abafundi kukuba mna wenza Ndifuna ukubona ukuba kuzakwenzeka ntoni.
Ukuba ne uShishino feed ibonakala iyindlela yokupapasha enokugcina (kwaye inyuse) ababhalisile. Andiqinisekanga, kodwa ndingakulungela ukubheja ukuba yayiziindwendwe ezazize apha ngenjini yokukhangela, ndaqaphela ukuba bangaphi ababhalisile endinabo, kwaye ndacinga ukuba kufanelekile ukuthatha inxaxheba. Amakhonkco emihla ngemihla avela kuDel.icio.us ubuncinci ukubonelela ngexabiso elithile kwaba babhalisi batsha.
Ukuba ungumrhumo omtsha, lindela ngakumbi kum! Ndiphakathi embindini wotshintsho kwingqesho kwaye ndihambisa isicelo semephu kumthengi. Inyaniso iyaxelwa, ndinotywala okanye ezimbini ngokuhlwa kule veki kunye nabanye endisebenza nabo kumqeshi wam wangoku. Yinkampani ekhula ngokukhawuleza ye-Inc 500 kwaye andifuni ukuba abasebenzi bacinge ukuba ndiyayishiya inkampani ngenxa yesizathu esibi… ndihamba nje ndicela umngeni omtsha kunye nethuba elihle.
UMvulo iya kuba lusuku lwam lokuqala kunye nomqeshi wam omtsha kwaye ndijonge phambili kuyo. Ekupheleni kweveki ezayo, izinto kufuneka zehle kwaye ndiza kubuya ndisebenze. Ngalo msebenzi, ndiza kubhengeza iifemu zophuhliso ezikhutshelwa ngaphandle, ishishini elitsha kwi-Intanethi (ukuthengisa indawo yokutyela kunye nokuxhasa), itekhnoloji entsha (Umdibaniso wePoint of Sale) kunye ne-e-commerce. Zilungiselele umxholo omkhulu njengoko ndingena ngaphakathi!
Martech Zone uyeza uvuko!
Agasti 1, 2007 kwi-8: 23 AM
UDoug -Ibhlog yakho intle. Yonwabele ihlobo nawo onke amathuba amatsha kwikhondo lomsebenzi wakho.
Agasti 1, 2007 kwi-10: 19 AM
Ndifuna ukukwazisa loo nto
Ndisafunda. Kutshanje, ngaphandle
Idolophu ngoJulayi kakhulu kwiholide.
Nangona kunjalo, yenze umazibuthe wemoto nge
iwebhusayithi yam. Fumana ifoto kwibhlog yam.
Ungavuya xa unokubona
Ujoyine iTechnorati emva kokufunda malunga
wena kwindawo yabo.
Ngoku ndifuna enye iFav.
Ngaba unazo naziphi na iingcebiso kum?
Ngethamsanqa nomsebenzi omtsha.
Agasti 1, 2007 kwi-11: 17 AM
Ndiyaqonda andothuki. Andinaxesha laneleyo lokuskena ii-RSS feeds zingathethi ndwendwela iisayithi zebhlog nganye (Beka ityala lonke kum!) Ukwenza izinto zibe mbi ngakumbi, ukuba ibhlogger ayiboneleli ngokutya okupheleleyo andinakukwazi ukufunda isiphoso kwaye _then_ kufuneka ndiye kwisiza ukugqibezela umnikelo. (Uxolo, ndiphinde ndityhole, yiphutha lam lonke.)
Agasti 1, 2007 ngo-1: 32 PM
Ukuba nekhefu kulungile kwaye ngethamsanqa ngokuhamba kwekhondo.
Sukuba nexhala malunga namanani. Eyam ibhlog ineenombolo ezintle zendlela, ukujonga iphepha kunye nababhalisi beRSS. Ndifumana ukunyuka okuthe rhoqo eStumbleUpon kodwa ke malunga nayo. Kodwa ke ndinexesha lokubhloga kabini ngeveki ukuze ndingaze ndilindele ukuba isiseko sokufunda kwam sikhule ngokukhawuleza.
Ndiza kuzama iqhinga elitsha lokufaka i-filler kungekudala ukuzisa kwizithuba ezi-3 ngeveki. Ndiza kubona ukuba kuhamba njani.
Agasti 2, 2007 kwi-7: 23 AM
Uvuko lweTekhnoloji yeNtengiso yeBlog uyeza!
Kwaye ndiza kuba kunye nawe xa isenzeka.
Agasti 2, 2007 kwi-9: 06 AM
Lixabise iposti- ithamsanqa ngotshintsho lomsebenzi! Ngaba ixhasa iingcinga zakho malunga nokukhula, njengoko uchazile ngokufanelekileyo. Nabani na owaziyo ngeeyure ezi-2 ezongezelelweyo kwiwijethi yosuku?! 😉
Agasti 8, 2007 ngo-5: 50 PM
Ngaba ukhe weva malunga neQuantcast, inkonzo efumana amanani otshintsho kuwo onke amabala. Awuhambi kakubi konke konke, ngesiqingatha sesithathu esiqhelekileyo, kwaye iindwendwe ezi-1 kwezingama-50 zihlelwa "njengomlutha":
Agasti 8, 2007 ngo-7: 15 PM
Ndinayo iJavacript ebambeke ezinyaweni zam ixesha elide. Enkosi ngokubeka le posi phezulu, nangona! Khange ndihambe nyani ndiye kujonga izibalo.
Ndiyabulela kakhulu kubahlobo, njengawe, abahlala bebuya kwaye bejoyina incoko. Ngeendlela ezininzi, ndingumbonisi… ndikhangela iincoko phakathi kwabanye abantu.